6 Yakajairika INTERPOL Tsvuku Ziviso & Zvaunogona Kuita Nezvavo | Mutemo Makambani Dubai
6 Zvakajairika INTERPOL Red Notices uye Zvaunogona Kuita Nezvavo
INTERPOL Tsvuku Yekutarisa Rondedzero
Kupara mhosva kumiganhu yenyika kunogona kuva chinhu chikuru. Neraki, INTERPOL mumakore apfuura yakazviratidza pachayo mukurwisa mhosva dzakaitwa pamiganhu yenyika.
Nekungobaya bhatani bhatani, INTERPOL inogona kuwana uye kugovana ruzivo rwese uye data rinodiwa kuti riite kusungwa kwechimbichimbi kwemunhu anonzi tsotsi, kumba kana kunze. Ruzivo urwu uye data zvinowanzo kugoverwa nenhengo dzenyika muchimiro chemaziviso akanyorwa-kodhi.
Uye pane zvese zvinomwe zviziviso zve INTERPOL zvinozivikanwa munyika dzese, chiziviso chitsvuku ndicho chakanyanya uye, zvinosuruvarisa, vanoshungurudzwa zvakanyanya. Muchokwadi, sangano rakapomedzerwa kushandisa zvisizvo chiziviso ichi nekuchishandisa kusheedzera vanhu vane mbiri yepamusoro pasina chikonzero.
Izvi zvinofanirwa kuitika here? Muchikamu chino, iwe unosvika pakunzwisisa kuti chiziviso chitsvuku chii uye kuti ungazvidzivirire sei kana ziviso tsvuku isina kugadziriswa ikapihwa inopesana newe.
Chii chinonzi Chiziviso Chitsvuku?
Chiziviso Chitsvuku chiziviso chekutarisa. Icho chikumbiro kune vekunze vemitemo vanoteedzera mutemo pasi rese kuti vaite kwenguva pfupi kusungwa pane anonzi mhosva. Ivo vanoita uku kusungwa kwechinguva kwakamirira kuzvipira, kudzoreredzwa, kana chimwe chiitiko chepamutemo.
INTERPOL inowanzo kuburitsa chiziviso ichi pachinzvimbo chenhengo yenhengo. Nyika ino haifanire kunge iri nyika yekumusha kwemufungira. Zvisinei, inofanira kunge iri nyika iyo mhosva yacho yakaitwa.
Kuburitswa kwezviziviso zvitsvuku kunoitwa nekukosha kukuru munyika dzese. Zvinoreva kuti uyo anofungidzirwa ari kutyisidzira kuchengetedzwa kwevanhu uye anofanira kutarisirwa saizvozvo.
Cherechedzo tsvuku ndeye, zvisinei, kwete yevasungwa vekunze waranti. Ingori ziviso yemunhu anodiwa. Izvi zvinodaro nekuti INTERPOL haigone kumanikidza vatevedzeri vemitemo mune chero nyika kuti vasunge munhu anoonekwa nezve red ziviso.
Nhengo imwe neimwe yenyika inosarudza kukosha kwayo kwepamutemo paRed Cherechedzo uye nemvumo yezviremera zvekumisikidza mutemo.
6 Common Red Notices Dzabudiswa
Pakati pezviziviso zvitsvuku zvakawanda zvakapihwa zvichipesana nevanhu, zvimwe zvinomira pachena. Mazhinji eaya ziviso akatsigirwa nezvinangwa zvezvematongerwo enyika kana kusvibisa munhu ari kutaurwa. Zvimwe zviziviso zvitsvuku zvinozivikanwa zvinosanganisira:
# 1. Chiziviso chitsvuku chikumbiro chekusungwa kwePancho Campo nemumwe wake weDubai
Pancho Campo aive Spanish tenesi nyanzvi uye bhizinesi aine mabhizinesi akasimbiswa muItaly neRussia. Achiri kuenda rwendo, akachengetwa kunhandare yendege yeUS uye akadzingwa nechikonzero chekuti akange apihwa chiziviso chitsvuku kubva kuUAE.
Ichi chiziviso chitsvuku chakange chapiwa nekuda kwekukakavadzana pakati pake neaimbova bhizinesi naye muDubai.
Mubhizimusi waaishanda naye akapomera Campo kuvhara kambani yake pasina mvumo yake. Izvi zvakakonzera kutongwa kwakaitwa iye asipo. Pakupedzisira, dare rakamuti akapara mhosva uye rakapa chiziviso chitsvuku kuburikidza ne INTERPOL.
Nekudaro, iye akarwa iyi uye akanunura mufananidzo wake mushure memakore gumi nemana ekurwa.
# 2. Kuvharirwa kwaHakeem Al-Araibi
Hakeem Al-Araibi aimbove mutambi wenhabvu ku Bahrain uye akapihwa ziviso Tsvuku kubva kuBahrain mu2018. Ichi chiziviso chitsvuku chaive, zvisinei, mukupesana nemitemo ye INTERPOL.
Maererano nemitemo yayo, chiziviso chitsvuku hachigone kupihwa kune vapoteri vakamirira nyika yavakatiza. Saka nekudaro, hazvishamise kuti kuburitswa kwechiziviso chitsvuku pamusoro peAl-Araibi kwakasangana nekushatirwa neruzhinji sezvo aive mupoteri achitiza kuhurumende yeBahraini.
Pakupedzisira, chiziviso chitsvuku chakasimudzwa mu2019.
# 3. Chikumbiro chitsvuku cheIran chekusungwa uye kudzoserwa kwaDonald Trump- aimbova purezidhendi weUS
Hurumende yeIran yakapa chiziviso chitsvuku kumutungamiri wenyika yeAmerica, VaDonald Trump, muna Ndira 2021. Chiziviso ichi chakapihwa kuti vamusunge nemhosva yekuurawa kwemukuru weIran Qassem Soleimani.
Chiziviso chitsvuku chakatanga kupihwa apo aive pachigaro ndokuzomutsiridzwa zvakare paakatsika kubva pachigaro.
Nekudaro, INTERPOL yakaramba chikumbiro cheIran chekuzivisa tsvuku kwaTrump. Izvo zvakazviita nekuti Bumbiro rayo rinotendera zvakajeka INTERPOL kubva kuzvibatanidza nechero nyaya inotsigirwa nezvematongerwo enyika, zvechiuto, zvechitendero, kana zvemarudzi zvinangwa.
# 4. Chikumbiro cheRussian Red Chiziviso chikumbiro chekusunga William Felix Browder
Muna 2013, hurumende yeRussia yakaedza kuti INTERPOL ibudise chiziviso chitsvuku kumukuru weHermitage Holding Company, William Felix Browder.
Izvi zvisati zvaitika, Browder akange ave kunetsana nehurumende yeRussia mushure mekunge amhan'ara nyaya kwavari yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekubatwa zvisirizvo kweshamwari yake uye waaishanda naye Sergei Magnitsky.
Magnitsky aive mukuru wezviitiko zvemitero kuFireplace Duncan, kambani yaBrowder. Akange akamhan'arira vakuru vezvemukati menyika yeRussia kuti ishandise zvisiri pamutemo mazita emakambani kuita zvemanyepo.
Magnitsky akazosungwa kumba kwake, akavharirwa, uye akarohwa nevakuru. Akafa makore mashoma gare gare.
Browder akabva atanga kurwisa kusaruramisira kwakaitirwa shamwari yake, izvo zvakazoendesa kuRussia kumudzinga kunze kwenyika nekutora makambani ake.
Mushure meizvozvo, hurumende yeRussia yakaedza kuisa Browder paRed chiziviso chemitero yekunzvenga mutero. Zvisinei, INTERPOL yakaramba chikumbiro ichi sezvo vavariro yezvematongerwo enyika yakachitsigira.
# 5. ChiUkraine Tsvuku chiziviso chikumbiro chekusungwa kweyaimbova Gavhuna weUkraine Viktor Yanukovych
Muna 2015, INTERPOL yakapa chiziviso chitsvuku pamusoro peaimbova Mutungamiri weUkraine, Viktor Yanukovych. Izvi zvaive pakukumbirwa nehurumende yeUkraine nekuda kwemhosva dzekubiridzira uye kutadza kwemari.
Gore rimwe izvi zvisati zvaitika, Yanukovych akange adzingwa muhurumende nekuda kwekukonana pakati pemapurisa nevaratidziri, zvichikonzera kufa kwevagari vazhinji. Akazotizira kuRussia.
Uye muna Ndira 2019, akatongwa akatongerwa makore gumi nematatu mujeri iye asipo nedare reUkraine.
# 6. Chikumbiro chitsvuku chikumbiro neTurkey nezvekusungwa kwaEnes Kanter
MunaNdira 2019, zviremera zveTurkey zvakatsvaga chiziviso chitsvuku kuna Enes Kanter, nzvimbo yePortland Trail Blazers, vachimupomera kuti ane hukama nesangano remagandanga. Vakuru vakataura nezvechinongedzo chake kuna Fethullah Gulen, mutungamiriri wechiMuslim akatapwa. Vakaenderera vachipa mhosva Kanter yekupa rubatsiro rwemari kuboka raGulen.
Kutyisidzirwa kwekusungwa kwatadzisa Kanter kufamba kubuda muUnited States achitya kuti achasungwa. Kunyange zvakadaro, akaramba zvakataurwa neTurkey, achiti hapana humbowo hunotsigira zvirevo izvi.
Zvekuita Kana INTERPOL Yaburitsa Red Chiziviso
Kuva nechiratidzo chitsvuku chakapihwa uchipesana newe kunogona kukuvadza mukurumbira wako, basa, uye bhizinesi. Nekudaro, nerubatsiro rwakafanira, iwe unogona kupihwa mukana wekupararira kwetsvuku chiziviso. Kana ukapihwa chiziviso chitsvuku, aya matanho ekutora:
Bata iyo Commission yeKutonga kweInternational Files (CCF). Une mvumo yekuwana chero dhata iyo INTERPOL ine pamusoro pako mumafaira ayo.
Bata vatongi venyika kwakapihwa ziviso kuti chiziviso chibviswe.
Kana ziviso yacho yakavakirwa pane zvisina kukwana zvikonzero, unogona kukumbira kuburikidza nezviremera zviri munyika maunogara kuti ruzivo rwako rwubviswe mudura re INTERPOL.
Imwe yeaya matanho anogona kunetsa kubata pasina rubatsiro rwegweta rinokwanisa. Uye saka, isu, pa Amal Khamis Vatsigiri, vanokwanisa uye vakagadzirira kukubatsira iwe pamatanho ese eichi chiitiko kusvikira zita rako rajekeswa.
Bata weInternational Criminal Defense Gweta muUAE
Mhosva dzemutemo dzinosanganisira matsvuku matsva muUAE dzinofanirwa kurapwa nekunakisisa uye hunyanzvi. Ivo vanoda magweta ane ruzivo rwakakura pamusoro penyaya iyi. Gweta rinogara richidzivirira mhosva rinogona kunge risina hunyanzvi uye ruzivo rwekugadzirisa nyaya dzakadai.
Neraki, magweta epasi rese ekudzivirira mhosva ku Amal Khamis Vatsigiri nyatso kuva nezvazvinotora. Isu takazvipira kuona kuti kodzero dzevatengi vedu hadzityorwa pane chero chikonzero. Isu takagadzirira kumira kune vatengi vedu uye kuvadzivirira. Isu tinokupa iwe yakanakisa mumiririri mune dzepasi rose mhosva mhosva nehunyanzvi mune Red Red nyaya.
Hwedu hunyanzvi hunosanganisira asi hauna kuganhurirwa ku: Hwedu hunyanzvi hunosanganisira: International Criminal Law, Extradition, Mutual Legal Assistance, Judicial Assistance, uye International Law.
Saka kana iwe kana munhu waunoda aine chiziviso chitsvuku chakapihwa pamusoro pavo, tinogona kubatsira. Bata nesu nhasi!